प्रिमियरमा किन देखिएनन् 'घामड शेरे' अर्थात् निश्चल ?
शुक्रबार, १६ जेठ २०७७
बलिउड / हलिउड खबर
प्रिमियरमा किन देखिएनन् ‘घामड शेरे’ अर्थात् निश्चल ?
प्रकाशित : शुक्रबार, कार्तिक २२, २०७६०९:४२
फिल्म । शुक्रबारबाट फिल्म ‘घामड शेरे’ प्रदर्शनमा आएको छ । फिल्ममा शेरेको भूमिकालाई निश्चल बस्नेतले निर्वाह गरेका छन् । उनि फिल्ममा घामड छन् । सिस्टम विरुद्ध लड्दै जादा अपाइने घामडपनलाई फिल्ममा देखाइएको छ । फिल्मका लिड अभिनेता उनै हुन् । अर्थात् फिल्म सफलता र सफलताको जस पनि उन्मै अडिने पक्का छ । यसैक्रममा फिल्म रिलिजको पुर्व सन्ध्यामा प्रिमियर गरिएको थियो । प्रिमियरमा कलाकर्मी र मिडियाकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।
यद्दपी मिडियाले प्रिमियर अगाडी र प्रिमियर सकिएपछी पनि फिल्मका शेरे अर्थात् निश्चललाई भेटेनन् । निश्चल किन देखिएनन् प्रिमियरमा ? धेरैले कानेखुसी गरे । केहिले उनि ‘स्वर्णिम चलचित्र महोत्सव’ का लागि विरगंज गएका हुन् कि भन्ने अनुमान पनि गरे । तर , उनि काठमाण्डौमै छन् । उनि प्रिमियरमा नपुगेका पनि होइनन् । तर , फिल्म सुरु भएपछी पुगेका थिए ।
क्युएफएक्सको नयाँ हल संचालनसँगै आयोजना गरिएको ‘घामड शेरे’ को प्रिमियरमा मान्छेको उपस्थिति बाक्लै थियो । यसैले गर्दा निश्चल ढिला पुग्दा उनको समुहलाई सिट पुगेन । निश्चल , स्वस्तिमा सहित उनका निम्तालु टोलिले सिट नपाउदा निर्देशक हेमराज बिसी पनि केहि तनावमा देखिन्थे । सिट नभएपछी निश्चल बाहिरिएका हुन् । निश्चल बाहिरीए पनि स्वस्तिमा केहि बेर हलमै थिइन् यद्दपी फिल्म सकिएर मिडियाले खोज्दा यो जोडीलाई हलमा पाएन । निम्तालु अतिथिले पनि प्रतिक्रिया दिईरहदा निश्चल र स्वस्तिमालाई खोजिरहेका थिए ।
‘दाल भात तरकारी’ अस्ट्रेलिया राईट्स् अहिलेसम्म कै महँगोमा बिक्रि
दीपिकाले दिल्लीमा प्रमोशन नगर्ने
सलमानले गरे नोटबुकको फस्टलुक रिलिज
रिलिज अपडेट : जोनको ‘र’ एकहप्ता अगाडी
मलाइका र अर्जुनको खुलमखुल्ला प्रेम
चप संघमा सिटौलाको नेतृत्व
‘निर्मातालाई २० प्रतिशत सरकारको सहयोग चाहिन्छ’
प्रदेश नं २ : पछिल्लो २४ घण्टामा ९६ जना संक्रमित
नेपालमा कोरोनाबाट छैठौं व्यक्तिको मृत्यु भएको घोषणा
पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ७० संक्रमित थपिए
जसले विरामी पितालाई लिएर पार गरिन् १२ सय किलोमिटर
के हेरेर बस्छौ अझै ? Naresh Bhattarai | Poem
प्रभासको जोडी आलिया ?
हलमा देखिए दर्शक
साउथका निर्देशकसँग काम गर्दै सलमान
Jay Hos Media Pvt. Ltd.
Address: Kathmandu 05, Nepal.
अध्यक्ष : नरेश भट्टराई
सम्पादक : प्रदीप कार्की
फोटो पत्रकार : योग प्रसाद विमली
काठमाण्डु – ०५ , भाटभटेनी मार्ग
सम्पर्क : ९८५११-९०२१६
© 2018 Jay Hos Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved